Notting Hill 1999 – Myanmar Subtitles
Genre: Comedy, Drama, Romance Director: Roger Michell Actors: Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans, Richard McCabe Country: UK, USA Released: 28 May 1999 Score: 7.1 Duration: 124 min Quality: 1080p BRrip, 720p BRrip Years: 1999 View: 1,258
ဒီဇာတျကားကိုတော့ ဘာသာပွနျအသဈကလေးဖွဈတဲ့ Yoon Nadi Maung ကဘာသာပွနျပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
Translated By Yoon Nadi Maung And Encoded By Lin Htike Aung
Download Size – 1080p BRrip (1.89GB), 720p BRrip (1.02GB)
မငျးဟာ စငျဒရဲလားလေးဆို ကိုယျဟာ အခြိနျတနျရငျကွှကျကလေးပွနျဖွဈသှားမယျ ဒရဲအိုကွီး။
မငျးကိုဆို လူတိုငျးက သိကွတယျ။ မငျးနာမညျကိုဆို တကမ်ဘာလုံးက မိုးကောငျကငျကွီးပေါကျကှဲမတတျအောငျ အျောကွလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့နာမညျကိုကြ ကိုယျ့အမတေောငျ တဈခါတလကေရြငျ မနေ့တေတျတာမြိုးပေါ့ အနျနာ”
Notting Hill ကတော့ အားလုံးသိတဲ့ မမနေို့ငျတဲ့ British Romance-Comedy ရုပျရှငျလေးပါ။
Notting Hill ကိုရေးခဲ့တဲ့ Curtis တဈယောကျ တဈရကျ သူ့အိမျရဲ့မကျြနှာကကျြကိုကွညျ့ရငျး စဉျးစားနတေုနျး ရခဲ့တဲ့ အတှေးတဈခုဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျဘတျထဲမှာ အခုဆိုရငျ နှဈ၂၀ တိတိရှိပွီဆိုတာ ဘယျသူယုံနိုငျမှာတုနျး။
သူစဉျးစားတာကတော့ ရှငျးရှငျးလေးပါ။ အမွငျ့ဆုံး လူတနျးစားဘဝနဲ့ အနိမျ့ဆုံးတို့ နှဈယောကျကိုတှဲပေးဖို့ပါဘဲ။ ဘဝကွီးကို ရောငျ့ရဲပွီးနတေတျတဲ့ လူရိုးကွီးရယျ ကွီးကွီးတတျ
အောငျမွငျနတေဲ့ ခတျေပျေါမငျးသမီးလေးရယျရဲ့ ခပျမွူးမွူး ခပျဆှေးဆှေး အခဈြဇာတျလမျးလေးဆိုပါစို့ …. ။
ဒီရုပျရှငျကို အခဈြဇာတျလမျးသကျသကျ ဖွဈသှားစတောကတော့ အဓိကဇာတျဆောငျ မငျးသား မငျးသမီးအပွငျ တခွားဇာတျဆောငျတှကေ သူတို့ရဲ့ ၃၆၀ဒီဂရီလညျနတေဲ့ အပွာရောငျတံခါးကလေးကစတဲ့ အခဈြပုံပွငျလေးမှာ သိပျအရေးမပါတာကွောငျ့ဘဲ
အဓိကအနနေဲ့ကတော့ မငျးသား William Thacker အဖွဈ Hugh Grant ရယျ Anna Scott အဖွဈ Julia Roberts (ကိုယျ့အကွိုကျဆုံးမှ အကွိုကျဆုံးမငျးသမီး) တို့က အဓိကပါဝငျသရုပျဆောငျထားပါတယျ။
သပျကာအဖွဈသရုပျဆောငျထားတဲ့ Hugh Grant ဟာ ဒီရုပျရှငျမတိုငျခငျမှာ Four Weddings andaFuneral ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျလောကျသာ လောကျလောကျလားလား ရိုကျထားတာကွောငျ့ Notting Hill ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ အခြိုးအကှမှေ့တျတိုငျတဈခုလို့ပွောလညျးမမှားဘူးဗြ။ သူ့အကွောငျးကိုပွောရငျ ဒီရုပျရှငျနဲပကျသကျပွီးဘဲ အဓိကထားပွောရမယျထငျတယျ။
ဒီကားထဲမှာတော့ ရိုးရိုးအအနဲ့ ဘဝကို ရောငျ့ရဲတတျတဲ့ ဈေးဦးတောငျတခါတလမေပေါကျတဲ့
ခရီးသှားစာအုပျဆိုငျပိုငျရှငျ လူရိုးကွီးတဈယောကျအနနေဲ့ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ရိုးအအပုံတှေ မွငျမွငျခွငျးခဈြမိတဲ့ Moment တှေ ကိုယျနဲ့မတူတဲ့လူ မတနျတဲ့လူ အဆငျ့အတနျးကှာတဲ့လူကို အခဈြတဈခုတညျးနဲ့ပေးဆပျတာတှေ ဒါတှဟော ဒီဇာတျကားမှာ ဂရနျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျမှုတှပေါဘဲ။
တဈခနျးဆိုရငျ သိပျခဈြတဲ့ အနျနာတညျးနတေဲ့ ဟိုတယျခနျးထဲ အတူသှားပွီး အထဲရောကျပွီးကာမှ Anna ခဈြသူနဲ့တှတေဲ့ ဇာတျဝငျခနျး …. Anna’s ခဈြသူက Grant ကို ဟိုတယျဝနျထမျးထငျပွီး မတူသလို မတနျသလိုဆကျဆံတာကို
Follow လိုကျခဲ့ ဇာတျဝငျခနျးမြိုးဟာ တကယျ့ရိုးမနျ့ဈဇာတျလမျးတဈခုရဲ့ အထှတျအထိပျခနျး (Climax Scene) ကို အားဖို့ပေးတဲ့ ဇာတျဝငျခနျးမြိုး .. ဒီလိုဇာတျဝငျခနျးမြိုးကို အလှပစှာသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Grant ရဲ့ သရုပျဆောငျမှုဟာ ပါးစပျကွီဟပွီး ငေးမောနမေိတဲ့အထိပေါ့ဗြာ …. ။
ကိုယျ့ဘဝရဲ့ အခြိနျတှကေိုသိပျခဈြတယျ။ ဘဝခငျြးမတူရကျနဲ့ ခဈြခဲ့မိတဲ့ မငျးကို ပိုလို့တောငျ ခဈြသေးတယျ။ အခြိနျတနျရငျ ဝေးရမှာသိလညျး ကိုယျဟာ အိတျသှနျဖာမှောကျခဈြမိနအေုနျးမှာဘဲ အနျနာ”
Anna Scott –
Anna အဖွဈ သရုပျဆောငျထားတဲ့ Julia Roberts ကတော့ သိပျထှထှေထေူးထူးပွောပွစရာမလိုပါဘူး။ ဒါတောငျသူနဲ့ပကျသကျရငျ ခြီးမှနျးခနျးပေါငျးမြားစှာ ဖှငျ့လို့ရသေးတယျ။ ၁၉၉၀ လောကျကထှကျတဲ့ Pretty Woman ဆိုတဲ့ဇာတျကားမှာ ဂန်ဓဝငျတှငျတဲ့ သရုပျဆောငျမှုမြိုးနဲ့ ပရိသတျတိုငျးရငျထဲအရောကျနရောယူခဲ့တဲ့ Julia Robert ဆိုတာဟာ သူမရဲ့အပွုံးခြိုခြိုလေးတှရေယျ ဇာတျကားရိုကျကှငျးတှမှော မထငျမှတျတဲ့ ဒိုငျလော့တှကေို မတိုငျပငျဘဲထုတျသုံးလရှေိ့တဲ့အရညျအခငျြးတှကွေောငျ့ ပရိသတျရငျထဲသာမက လူတိုငျးကွိုကျ မွငျသူတိုငျးကွိုကျတဲ့မငျးသမီးတဈလကျဆိုတာ ဘယျသူမှငွငျးလို့ရနိုငျမှာမဟုတျတာတော့အမှနျဘဲ။
ဒီဇာတျလမျးထဲမှာလညျး ကမ်ဘာကြျောမငျးသမီးလေး Anna Scott အဖွဈသရုပျဆောငျထားတာဟာ တကယျ့ Masterpiece တဈခုပါပဲ။ မီဒီယာရဲ့မှနျးကပျြမှုကနေ တခနလောကျလှတျမွောကျဖို့ လူရိုးကွီး “သပျကာ”ကိုအသုံးခမြိသလိုဖွဈသှားတဲ့အခါ၊ သူ့သတငျးတှမေပွနျ့ဖို့ သူ့ဂုဏျသိက်ခာမထိခိုကျဖို့အတှကျ ‘လူအ’ကွီးကိုအသုံးခခြဲ့ ဇာတျဝငျခနျးတှဟော ဒီအခဈြဇာတျလမျးကလေးရဲ့ အသကျပါဘဲ။
“အခဈြဟာ သိပျရိုးရှငျးတယျ … အခဈြစဈဟာ ဘယျတော့မှ မကရြှုံးဘူးတဲ့။ ဟုတျရဲ့လား အနျနာ”
ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ဘာသာပြန်အသစ်ကလေးဖြစ်တဲ့ Yoon Nadi Maung ကဘာသာပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
မင်းဟာ စင်ဒရဲလားလေးဆို ကိုယ်ဟာ အချိန်တန်ရင်ကြွက်ကလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ် ဒရဲအိုကြီး။
မင်းကိုဆို လူတိုင်းက သိကြတယ်။ မင်းနာမည်ကိုဆို တကမ္ဘာလုံးက မိုးကောင်ကင်ကြီးပေါက်ကွဲမတတ်အောင် အော်ကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်နာမည်ကိုကျ ကိုယ့်အမေတောင် တစ်ခါတလေကျရင် မေ့နေတတ်တာမျိုးပေါ့ အန်နာ”
Notting Hill ကတော့ အားလုံးသိတဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ British Romance-Comedy ရုပ်ရှင်လေးပါ။
Notting Hill ကိုရေးခဲ့တဲ့ Curtis တစ်ယောက် တစ်ရက် သူ့အိမ်ရဲ့မျက်နှာကျက်ကိုကြည့်ရင်း စဉ်းစားနေတုန်း ရခဲ့တဲ့ အတွေးတစ်ခုဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ဘတ်ထဲမှာ အခုဆိုရင် နှစ်၂၀ တိတိရှိပြီဆိုတာ ဘယ်သူယုံနိုင်မှာတုန်း။
သူစဉ်းစားတာကတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အမြင့်ဆုံး လူတန်းစားဘဝနဲ့ အနိမ့်ဆုံးတို့ နှစ်ယောက်ကိုတွဲပေးဖို့ပါဘဲ။ ဘဝကြီးကို ရောင့်ရဲပြီးနေတတ်တဲ့ လူရိုးကြီးရယ် ကြီးကြီးတတ်
အောင်မြင်နေတဲ့ ခေတ်ပေါ်မင်းသမီးလေးရယ်ရဲ့ ခပ်မြူးမြူး ခပ်ဆွေးဆွေး အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးဆိုပါစို့ …. ။
ဒီရုပ်ရှင်ကို အချစ်ဇာတ်လမ်းသက်သက် ဖြစ်သွားစေတာကတော့ အဓိကဇာတ်ဆောင် မင်းသား မင်းသမီးအပြင် တခြားဇာတ်ဆောင်တွေက သူတို့ရဲ့ ၃၆၀ဒီဂရီလည်နေတဲ့ အပြာရောင်တံခါးကလေးကစတဲ့ အချစ်ပုံပြင်လေးမှာ သိပ်အရေးမပါတာကြောင့်ဘဲ
အဓိကအနေနဲ့ကတော့ မင်းသား William Thacker အဖြစ် Hugh Grant ရယ် Anna Scott အဖြစ် Julia Roberts (ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးမှ အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး) တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
သပ်ကာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Hugh Grant ဟာ ဒီရုပ်ရှင်မတိုင်ခင်မှာ Four Weddings andaFuneral ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လောက်သာ လောက်လောက်လားလား ရိုက်ထားတာကြောင့် Notting Hill ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ အချိုးအကွေ့မှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ပြောလည်းမမှားဘူးဗျ။ သူ့အကြောင်းကိုပြောရင် ဒီရုပ်ရှင်နဲပက်သက်ပြီးဘဲ အဓိကထားပြောရမယ်ထင်တယ်။
ဒီကားထဲမှာတော့ ရိုးရိုးအအနဲ့ ဘဝကို ရောင့်ရဲတတ်တဲ့ ဈေးဦးတောင်တခါတလေမပေါက်တဲ့
ခရီးသွားစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင် လူရိုးကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရိုးအအပုံတွေ မြင်မြင်ခြင်းချစ်မိတဲ့ Moment တွေ ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့လူ မတန်တဲ့လူ အဆင့်အတန်းကွာတဲ့လူကို အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ပေးဆပ်တာတွေ ဒါတွေဟာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ဂရန့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်မှုတွေပါဘဲ။
တစ်ခန်းဆိုရင် သိပ်ချစ်တဲ့ အန်နာတည်းနေတဲ့ ဟိုတယ်ခန်းထဲ အတူသွားပြီး အထဲရောက်ပြီးကာမှ Anna ချစ်သူနဲ့တွေ့တဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း …. Anna’s ချစ်သူက Grant ကို ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းထင်ပြီး မတူသလို မတန်သလိုဆက်ဆံတာကို
Follow လိုက်ခဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးဟာ တကယ့်ရိုးမန့်စ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုရဲ့ အထွတ်အထိပ်ခန်း (Climax Scene) ကို အားဖို့ပေးတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး .. ဒီလိုဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုးကို အလှပစွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Grant ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုဟာ ပါးစပ်ကြီဟပြီး ငေးမောနေမိတဲ့အထိပေါ့ဗျာ …. ။
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အချိန်တွေကိုသိပ်ချစ်တယ်။ ဘဝချင်းမတူရက်နဲ့ ချစ်ခဲ့မိတဲ့ မင်းကို ပိုလို့တောင် ချစ်သေးတယ်။ အချိန်တန်ရင် ဝေးရမှာသိလည်း ကိုယ်ဟာ အိတ်သွန်ဖာမှောက်ချစ်မိနေအုန်းမှာဘဲ အန်နာ”
Anna အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Julia Roberts ကတော့ သိပ်ထွေထွေထူးထူးပြောပြစရာမလိုပါဘူး။ ဒါတောင်သူနဲ့ပက်သက်ရင် ချီးမွှန်းခန်းပေါင်းများစွာ ဖွင့်လို့ရသေးတယ်။ ၁၉၉၀ လောက်ကထွက်တဲ့ Pretty Woman ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာ ဂန္ဓဝင်တွင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ ပရိသတ်တိုင်းရင်ထဲအရောက်နေရာယူခဲ့တဲ့ Julia Robert ဆိုတာဟာ သူမရဲ့အပြုံးချိုချိုလေးတွေရယ် ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းတွေမှာ မထင်မှတ်တဲ့ ဒိုင်လော့တွေကို မတိုင်ပင်ဘဲထုတ်သုံးလေ့ရှိတဲ့အရည်အချင်းတွေကြောင့် ပရိသတ်ရင်ထဲသာမက လူတိုင်းကြိုက် မြင်သူတိုင်းကြိုက်တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဆိုတာ ဘယ်သူမှငြင်းလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်တာတော့အမှန်ဘဲ။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာလည်း ကမ္ဘာကျော်မင်းသမီးလေး Anna Scott အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာဟာ တကယ့် Masterpiece တစ်ခုပါပဲ။ မီဒီယာရဲ့မွန်းကျပ်မှုကနေ တခနလောက်လွတ်မြောက်ဖို့ လူရိုးကြီး “သပ်ကာ”ကိုအသုံးချမိသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါ၊ သူ့သတင်းတွေမပြန့်ဖို့ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်ဖို့အတွက် ‘လူအ’ကြီးကိုအသုံးချခဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ ဒီအချစ်ဇာတ်လမ်းကလေးရဲ့ အသက်ပါဘဲ။
“အချစ်ဟာ သိပ်ရိုးရှင်းတယ် … အချစ်စစ်ဟာ ဘယ်တော့မှ မကျရှုံးဘူးတဲ့။ ဟုတ်ရဲ့လား အန်နာ”
(1.89GB) Download Archive Myanmar 1080p
(1.89GB) Download Filerocks Myanmar 1080p
(1.89GB) Download Gofile Myanmar 1080p
(1.89GB) Download Megaup Myanmar 720p
(1.02GB) Download Archive Myanmar 720p
(1.02GB) Download Filerocks Myanmar 720p
(1.02GB) Download Gofile Myanmar 720p
(1.02GB) Download ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
#Notting Hill 1999 #Download Notting Hill 1999 Full Movie #Free Notting Hill 1999 Download
One response to “Notting Hill 1999”